एमसीसी गम्भीर राष्ट्रघाती छ, यो कम्युनिष्ट सरकार होइन ! « Media for all across the globe
एमसीसी गम्भीर राष्ट्रघाती छ, यो कम्युनिष्ट सरकार होइन !
राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला ७ वर्षसम्म लगातार नेपालमा बसेपछि मात्रै नागरिकता दिने लगायतका मुद्दामा सरकारलाई सर्मथन गर्ने बताएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले नक्सा र नाकगरिकता कानुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानले अहिले भारत अीलीलाई हटाएर राजतन्त्र ल्याउन खोजिरहेको समेत खुलासा गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्लो राजनीतिबारे जनमोर्चाको धारणा –
१. एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको मात्र होइन, त्यो गम्भीर राष्ट्रघाती छ । यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यसबारे नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुताबासका अधिकारी र अमेरिकाको सुरक्षा निकाय -पेन्टागन) ले स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यो रणनीतिको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई सामरिक रुपले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मद्दत पुराउनु हो । त्यसलाई संसदबाट पारित गरेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहने छैन र हामी अमेरिकी क्याम्पमा खडा हुन पुग्ने छौं ।
२. सरकारले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेपछि उनलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । उक्त प्रावधानलाई हामीले सही मान्दछौँ र त्यसको समर्थन गरेका छौँ । तर, ती महिलाले माईती देशको नागरिकता त्यागिसकेपछि नै नेपाली नागरिकता दिनु सही हुन्थ्यो । माईती देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रियामा लगे मात्र हुने विद्यमान कानुनको व्यवस्था सही छैन । यसबाट दोहोरो नागरिकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यसको साथै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पनि सही छैन । त्यसप्रकारका व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्दछौँ ।
सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने उपरोक्त व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छन् । त्यो विरोध तराईका केही जिल्लामा सीमित छ । यो सामान्य कुरा हो कि कुनै पनि देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति त्यस देशको विशिष्ट स्थितिमा निर्भर गर्दछ । दुई विशाल जनसंख्या भएका देशहरुको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । आˆनो देशको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाएको छ । रोजगारीका लागि देशको श्रमशील शक्ति विदेशमा जान परेको छ । वर्षेनी विदेशी खासगरी भारतीय नागरिकहरु नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा लाखौँ भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । निर्वाचनको बेला नेपाल प्रवेश गरी मतदान समेत गर्ने गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।
३. हामीले सुरुदेखि नै संघीय प्रणाली नेपालको लागि सही नभएकाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ । अब संघीयता व्यवहार मै अनावश्यक र असफल सिद्ध भइसकेको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गरेको छ भने अर्कोतर्फ यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठूलो खर्चका कारणले विकास निर्माणको खर्चमा व्यापक कटौति गर्न परेको छ ।
संघीय प्रणालीको मुख्य अंग प्रदेशको राजनीतिक संरचना हो । व्यवहारमा यसको औचित्य पुष्टि हुने कुनै काम भएको छैन । कोरोना महामारीको बेलामा पनि त्यसले आवश्यक कार्य गर्न परेको छैन । केन्ऽ र स्थानीय तहले नै कार्य गरेका छन् । बीचको यो तहले कार्यप्रक्रिया बढाएको छ । अहिले संकटको बेलामा पनि प्रदेशले आˆना लागि सेवा सुविधा बढाएको छ । यहाँ बढी अनियमितता पनि हुने गरेको छ ।
४. देशमा कोरोना तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । विदेशबाट आएकाहरुलाई सिधै गाउँ बस्तीसम्म पठाउँदा स्थिति अरु गम्भीर बन्ने छ । कतिपय विरामीहरुलाई पीसिआर परिक्षण नगरीकन घर फिर्ता गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन । औषधि, उपकरण तथा उपचारको प्रयाप्त व्यवस्था छैन । सामाजिक दूरी पालना गर्ने कुरामा उपेक्षा हुँदै गएको छ ।
५. लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको भूमि फिर्ता लिन नेपालमा अपूर्व एकता प्रदर्शन भएको छ । सरकारले उक्त भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने काम गरेको छ । त्यसको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन पनि भएको छ । यो धेरै गौरवको कुरा हो ।
तर, नेपाल सरकारको वार्ताको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । यसको अर्थ नेपालको उक्त भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहान्न । भारतीय सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा मिडियाहरुले नेपाललाई चीनको उक्साहटमा वा चीनले उचालेर नेपालले त्यसो गरिरहेको आरोप लगाएको छन् । त्यो भूमि नेपालको हो वा होइन भन्ने तथ्यलाई डाईभर्ट गरी नेपाललाई बलमिच्याई गरी दमन गर्न खोजेको छ । तर भारत-चीन सीमा विवादमा भारत आफैले वार्ताको पहलकदमी गरेको छ र चीनसँग त्यसप्रकारको वार्ता भएको छ ।
६. भ्रष्टाचार केन्ऽदेखि स्थानीय तहसम्म, व्यक्तिदेखि संस्थासम्म फैलिएको छ । अनुचित लेनदेन नभई काम हुँदैन भन्ने मानसिकता बनेको छ । कोरोनाले गर्दा उत्पन्न संकटपूर्ण स्थितिमा त्यसको रकममा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचार स्वयं प्रणाली बनेको छ । यसको दुष्परिणाम जनतामा व्यापक निराशा र विरोधको भावना बढेर गएको छ । यो विरोध सत्तासिन दल नेकपाप्रति र त्यसका कारणले गणतन्त्रप्रति पनि बढेको छ । राजतन्त्रवादीका गणतन्त्र विरोधी गतिविधि बढेर गएका छन् । यो खतराप्रति गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर बन्नु पर्छ ।
८. हामीले शुरुदेखि नै बताउँदै आएका छौँ कि नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । यो गणतन्त्र पनि बर्जुवा व्यवस्था हो । यिनबाट देश र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान हुँदैन ।
नेकपाको निम्न पुँजीवादी वर्ग चरित्रका कारणले सम्पूर्ण रुपमा र दृढतापूर्वक राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता तथा जनताको हितको पक्षमा रहन सक्दैन । त्यो कुरा त्यसका व्यवहारमा पनि देखापरेका छन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बुर्जुवा व्यवस्था भए पनि अहिले त्यसको सकारात्मक महत्व भएकाले त्यसको रक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । उपरोक्त कुरामा सरकारको सकारात्मक योगदान रहेको छ ।
९. अहिले कोरोनाले सृजना गरेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । स्कूल, कलेजमा शिक्षण बन्द भएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाईन शिक्षण गर्न थालेका छन् । अब सबैतिर अनलाइन शिक्षण गर्ने कि नगर्ने ? विद्यार्थीले नपढेको महिनाको शुल्क तिर्ने कि नतिर्ने ? प्राइभेट शैक्षिक संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाउने कि नपाउने ? आदि विषयमा विवाद भइरहेको छ ।